हिच र मार्केटिंग | Martech Zone
हिच र मार्केटिंग
शनिबार, मे 26, 2007 आइतबार, अक्टोबर 4, 2015 Douglas Karr
यदि तपाईंसँग कहिले मौका भएको छैन भने, चलचित्र हेर्नुहोस् Hitch। चलचित्र केहि बर्ष पुरानो हो, तर अझै मार्केटिंगको लागि उत्कृष्ट रूपक। चलचित्रमा, अलेक्स हिचन्स (विल स्मिथ), उनीहरूको सपनाको केटी फेला पार्ने मौका बिना केटाहरूलाई शिक्षा दिन्छ। उसले दिने सल्लाह भनेको तपाईंको चम्किरहेका गल्तीहरू कम गर्न, तपाईंको मितिमा ध्यान दिनुहोस्, र गृहकार्य गर्नुहोस्।
सब भन्दा यादगार दृश्य द्रुत डेटि scene दृश्य हो जहाँ तर्कले पछ्याउँदछ। सारा (इवा मेन्डेस) लाई पूर्ण अपमान गरिएको छ कि हिचले तिथिहरू बनाउँदछन्, तिथिहरू बढी अविस्मरणीय बनाउन उनको र उनको परिवारको सम्पदाको बारेमा सुराग खोज्छिन्। उनी अपमानित छिन् कि उनी कुशलतापूर्वक हेरविचार गरिरहेकी छिन्, हिच छक्क पर्छिन् किनकि उनी केवल उनलाई जितेको चीजहरू गर्न कोशिस गर्दै छन्।
फिल्मको मूलमा यो इमान्दार छ वा छैन। यो कोचिंग थिएन, परिवर्तन, योजना, आदि वास्तवमा सारा क्रोधित कि, यो विचार थियो कि Hitch ईमानदार हुनुहुन्न, सम्बन्ध खोजिरहेको थिएन, र बस मा अर्को खाल राख्न खोजिरहेको हुन सक्छ आफ्नो बेडपोस्ट।
मार्केटिंग भनेको तपाइँको ग्राहक वा सम्भाव्यता बुझ्नको लागि तपाइँको गृहकार्य गर्दै छ, त्यसपछि ईमानदारीता र विश्वास मा सम्बन्ध बनाउने। हामी मध्ये धेरैसँग उत्पादनहरू र सेवाहरू छन् जुन शानदार छन्, तर हामी ती उत्पादनहरू वा सेवाहरूको प्रयासमा मान्छेहरूलाई 'आकर्षित गर्न' असक्षम छौं। यदि तिनीहरूले हामीलाई मात्र मौका दिए भने, हामी जान्दछौं कि हामी तिनीहरूलाई ग्राहकमा परिवर्तन गर्न सक्दछौं जसले हामीलाई माया गर्छन्।
सायद त्यहाँ केही विडंबना छ कि इन्टरनेटमा धेरै डेटि services सेवाहरू छन् र यति धेरै मार्केटिंग परामर्शदाता। हामी मध्ये धेरैलाई हाम्रो मार्केटिंगको साथ मद्दत चाहिन्छ (र केटीलाई लिन!)।
टैग: तथ्याङ्कडाटा क्याप्चरचिन्तामार्केटिङयोजनास्मिथ हुनेछ
के तपाईको व्यवसायलाई यी चार कुञ्जी मेट्रिक्स बारे सचेत छ?
मई 26, 2007 मा 6: 04 PM
डग, मैले फिल्म दुई पटक हेरेको छु र मैले यसलाई मेरो व्यक्तिगत र व्यावसायिक जीवनमा लागू गरेको छु। यसले मलाई सधैं मैले चाहेको मान्छे र हराउन नसकिने उत्कृष्ट काम पाएको छु। केहि तरिकामा यो केवल एक चलचित्र हो, तर यदि तपाइँ यसलाई वास्तवमै हेर्नुहुन्छ भने, यो जीवनको लागि दर्शन जस्तै छ। सल्लाहले केटा/केटी प्राप्त गर्न, कम्पनीमा जान र नयाँ व्यवसाय पिच गर्न वा तपाईंको पहिलो घर प्राप्त गर्नका लागि काम गर्दछ। ती सबै परिस्थितिहरूको लागि तपाईं आफ्नो उत्कृष्ट हुन चाहनुहुन्छ, आफ्नो गृहकार्य गर्नुहोस् र वास्तवमा के भइरहेको छ ध्यान दिनुहोस्।
मई 28, 2007 मा 12: 16 PM
Duane, त्यो अद्भुत छ! अन्तर्निहित सन्देश यति धेरै मन पराउने म एक्लो होइन भनेर खुसी छु।
मई 28, 2007 मा 11: 36 एएम
म सहमत छु। मैले मेरा ग्राहकहरूसँग TRUST मा दुईवटा इट्टा र मोर्टार कम्पनीहरू निर्माण गरेको छु। मेरो एउटा व्यवसायमा, हामीले हाम्रा कम्प्युटर मर्मत ग्राहकहरूसँग इमानदार भएर बजारमा आफूलाई फरक पार्न सक्षम भएका छौं! यो दुखद दिन हो जब तपाईं वरपरको अन्तिम इमानदार कम्प्युटर मर्मत व्यवसायहरू मध्ये एक हुनुहुन्छ!
मई 28, 2007 मा 12: 19 PM
म एक आँखा झिम्काउन हार्डवेयर व्यवसायमा थिएँ किनभने म केवल प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दिन। म एउटा प्रणालीको एक हेक निर्माण गर्न सक्छु तर 1/3 लागतको इमेशिनहरू द्वारा मेरो बटलाई कालो पाइरहेको थियो। म सायद व्यापारमा बस्नुपर्थ्यो तर तपाईले गुणस्तरको लागि तिर्नु पर्छ भनेर व्याख्या गर्दा थकित भएँ - सबै प्लास्टिक र धातुको बक्समा आउने कम्प्युटरहरूसँग पनि।
तपाईं एउटा कुरामा सहि हुनुहुन्छ... त्यहाँ धेरै कम कम्प्युटर मर्मत व्यवसायहरू छन् जसले प्रतिस्पर्धाको दबाब सामना गर्न सक्छन्। यो तपाइँको कम्पनी को लागी एक प्रमाण हो! बधाई छ।